Interview – Mix Khabar
काठमाडौं- पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पर्ने आरुबोटे गाउँमा भएको सामूहिक हत्याको अनुसन्धान कार्य सुरु भइसकेको पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्। प्रजिअ मुरारि वस्तीका अनुसार मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आरुबोटे गाउँमा धनराज शेर्माको घरमा पाँच जना र बमबहादुर फ्याकको घरमा चार जनाको सामूहिक हत्या भएको पाइएपछि त्यहाँ खटिएको प्रहरी टोलीले घटनाबारे मुचुल्का तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। ...
काठमाडौं- युटुबमा यतिबेला निकै चर्चामा छिन्, पुष्पलता आचार्य । उनी आफ्नो नामले भन्दा पनि बुलेट आमा वा बुलेटवाली आमा भनेर दर्शक माँझ परिचित भएकी छिन् । ६१ बर्षकी पुष्लता यो उमेरमा पनि उहि जोश र जाँगरका साथमा युवा पुस्तालाई पछि पार्दै रफ्तारमा बुलेट बाईक दौडाउँछिन् । उनको यो कला देख्दा धेरै अचम्मित पर्दछन् । कतिले त उनलाई बुलेट चलाउन छोड्न पनि सुझाउँछन् तर पुष्पलता नारीहरु पुरुष भन्दा कुनै कुरामा कम...
रिसानी माफकी 'सुकुमाया' चर्चित कलाकार आशा खड्काले आफ्नो जन्मदिन आज काँडाघारीमा रहेको फ्युचर होप नेपालमा रहेका अनाथ बालबालिकाहरुसँग केक काट्दै, उनीहरुलाई खाना खुवाउँदै र स्कुल ड्रेस उपहार दिदै मनाईन् । राम्री र राम्रो मन भा'की 'उजेली' आशालाई जन्मदिनको मुरी मुरी शुभकामना । आशाको यो कार्यको सम्मान गर्दै सबैले शेयर गरिदिनुहोला अनि जन्मदिनको शुभकामना पनि दिनुहोला है ! सोही अवसरमा आशाले आफ्नी आमा...
विवाद पछि कुलमानको अन्तर्वार्ता : देशमा जनतालाई अन्धारबाट मुक्त गर्छु भन्दा पनि काम गर्न दिदैनन भन्दै आक्रोश पोखे कुल्मान्ले (भिडियोसहित)
नेपाल विधुत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ माथि ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा ९ अर्ब बढि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाए संगै कुलमान घिसिङ्गले प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस आफु झुण्डीएर तयार रहेको ...
कुलमान घिसिङ्गलाई मोदीको जवाफि चेतावनी : ‘म पनि दोशी प्रमाणीत भए टुडिखेलमा एक चम्चा पानीमा डुबेर मर्छु’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि अहिले नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । उनलाई सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले ९ अर्व रुपैया भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । सांसद अमनलाल मोदीले ९ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप कुलमानलाई लाएका छन् । लोड सेडिगं हटाएर निकै चर्चा पाएका कुलमानलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाए पछि अमनलाल मोदीको सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध भइरहेको छ । अ...
काठमाडौं- कलाकार तथा सँचारकर्मी राम्रो दोहोरी पनि गाउँछन् भन्न्े कुरा उनले इन्द्रेणी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको दोहोरीबाट प्रष्ट भयो । टिका सानुसँग उनले गाएको लाईभ दोहोरी हालसम्म १९ लाख भन्दा बढिले हेरिसके । निकै नै रुचाईएको उक्त एपिसोड टिका सानुको धेरै लाईभ दोहोरी मध्ये सबैभन्दा धेरै भ्युज पाएको एपिसोड हो । यसैबिच शिशिर टिका फेरी भेटेर अर्को दोहोरी भिडन्त गरेका छन् । इन्द्रेणी कार्यक्रम छा...
यदि त्यो दिन जिबराज आश्रित नझर्किएको भए र मदनले उनको कुरा नमानेको भए दुर्घटना हुने थिएन, मदनको हत्या हुने थिएन् (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले मदन भण्डारीको दास ढुंगा दुर्घटना नभएर हत्या नै भएको दाबी गरेका छन् । भण्डारीसँग पोखराबाट खैरेनीसँग सँगै यात्रा गरेका कट्टेलले अहिलेसम्म उक्त हत्याकाण्डबारे भण्डारीकी पत्नी वर्तमान राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी र स्वर्गीय भण्डारीका नजिकका साथी भनिएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले कुनै चासो नदिँदा आफूलाई दुःख लागेको बताएका छन् । ...
१४ जना अनाथ बालबालिकाको पिता हुन्- कलाकार ‘इकु’ । फिल्म र सिरियलबाट कमाएको पैसाले यि बच्चाहरु पाल्छन् (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरु कलाकारितासँगै समाजसेवामा पनि अग्रसर हुन थालेका छन् । यसको गतिलो उदाहरण सिताराम कट्टेल धुर्मुस र कुन्जना घिमिरे सुन्तली, नायिका स्वेता खड्कालगायत हुन् । अन्य कलाकारहरुमा पनि त्यो जागरुकता देखिन थालेको छ । कलाकार शुलेमान शंकर जो ‘इकु’नामले परिचित छन्, उनी पनि समाजसेवातर्फ आकर्षित भएका छन् । टेलिचलचित्र मेरिबास्सैबाट दर्शकले शुलमानलाई ‘इकु’ नामले नै चिन्न थाले ।...
युटुबमा भाईरल बनिन्- एउटा खुट्टा काँधमा राखेर स्कुटी हाँक्ने १७ बर्षे यि युवती ! सबै चकित परे (भिडियो हर्नुस)
काठमाडौं- गोरखाकी १७ बर्षकी युवती सुनैना खनालसँग अचम्मको कला छ । तेक्वान्दोमा व्लाक बेल्ट समेत पाएकी सुनेना एक खुट्टा काँधमा हालेर अर्को खुट्टाले टेक्दै सरर स्कुटी चलाउँछिन् । उनी १० देखि १५ मिनेटसम्म यस्तो गर्छिन् । उनको यो कला देखेर हेर्नेहरु चकितै पर्दछन् तर उनलाई हौसला दिने भने कोहि भएनन् । शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याएका सुनेनाले बिचमै पढाई पनि छोडिन् । उनले परिवारको समस्याका कारण यस्...
ज्युँदा सर्पहरुसँगै सुत्ने, खाने पाल्पाका २१ बर्षे सागर पाण्डे ! जसलाई सयौं सर्पहरुले टोक्दा पनि केहि भएन (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं- पाल्पा अर्गलीका सागर पाण्डे सर्प बचाउ अभियानमा लागेका छन् । चार बर्षको अवधिमा उनले तीन सयभन्दा बढी सर्प बचाइ सकेका छन् ।सर्प देखेर नडराउने मानिस कमै हुन्छन् । तर पाल्पा अर्गलीका सागर पाण्डे सर्पलाई समातेर सजिलै खेलाउने गर्छन् । आफ्नै ६ महिनाकी बहिनी सुतिरहेको बेला नजिकै सर्प देखेपछि बहिनीलाई बचाउन उनले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सर्प समातेपछि उनी अहिले जुन सुकै सर्पलाई पनि सजिलै समात्न सक्...